iMac Pro သည် CPU 1 | ဖြင့် စတုတ္ထမြောက် ပရိုဆက်ဆာ M12 ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ငါ mac ကပါ။
iMac Pro သည် CPU 1 ဖြင့် စတုတ္ထမြောက် ပရိုဆက်ဆာ M12 ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Ignatius ခန်းမ | | iMac, ကောလာဟလများ
iMac Pro အယူအဆ
မတ်လ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Apple က iMac Pro ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကဏ္ဍကို ဦးတည်တဲ့ စံပြတစ်ဦးပါ။ ယူရို 5.499 မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီး4နှစ်ကြာ ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Apple သည် ဤမော်ဒယ်ကို မေ့လျော့သွားပုံရပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အသိပေးသည့်အတိုင်း မျိုးဆက်သစ်အတွက် လုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။ ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်.
နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ကောလဟာလတွေအရတော့ နောက်ထပ် iMac Pro ပါ။ M1 ပရိုဆက်ဆာ၏ စတုတ္ထမော်ဒယ်ကို 12 cores အထိ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် Apple တွင် M1 ပရိုဆက်ဆာ- M1 မော်ဒယ်သုံးမျိုးရှိသည်။ ခြောက်သွေ့ရန်, M1 Pro နှင့် M1 Max ။ စတုတ္ထမော်ဒယ်ကတော့ iMac Pro မှ ထွက်လာမှာပါ။
M1 Max ထက်ကျော်လွန်လာမည့် iMac Pro အတွက် ထပ်လောင်းဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ရရှိထားပါသည်။ 12 Core CPU ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် iMac ကိုရည်ညွှန်းသည့် ကုဒ်အတိုအထွာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် အတွင်းပိုင်းအမည်ပေးသူသည် iMac Pro ဖြစ်သည်။ ကောင်းကျိုးများဆီသို့ ဦးတည်သည်။
- Dylan (@dylandkt) ဇန်နဝါရီလ 23, 2022
ဒီကောလာဟလရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ပေါက်ကြားသူ @Dylandkt က မနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ တွစ်တာမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ iMac Pro သည် M1 Max ထက် ပိုမိုအားကောင်းသည့် ပရိုဆက်ဆာကို ထည့်သွင်းလာမည်ဖြစ်သည်။12-core CPU ပေါင်းစပ်ပါဝင်မည့် ပရိုဆက်ဆာ။
Mac mini၊ MacBook Air နှင့် MacBook Pro တို့နှင့်အတူ စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည့် မူရင်း M1 ပရိုဆက်ဆာသည် 8- သို့မဟုတ် 7-core ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ 8-core GPU ပါရှိသည်။ M1 Pro တွင် 8 သို့မဟုတ် 10 core CPU နှင့် M1 Max တွင် 10 core CPU ပါ၀င်သည် ။ Memory ပံ့ပိုးမှု မြင့်မားပြီး Pro မော်ဒယ်ထက် ဂရပ်ဖစ် cores ပိုများသည်။.
ယခုအချိန်တွင် Apple မှဤ M1 ပရိုဆက်ဆာအသစ်တွင်ပေးဆောင်နိုင်သည့် cores များပေါင်းစပ်မှုကိုမသိရသေးသော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေများသည်။2သည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး ကျန် 10 သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
Dylandkt က အဆိုပါ Mac မော်ဒယ်ကို အခိုင်အမာ ပြောကြားထားသည်။ ဒီပရိုဆက်ဆာအသစ်က iMac Pro ကို ပွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ ဤပေါက်ကြားသူတစ်ဦးက M2 ပရိုဆက်ဆာပါသော iPad Pro သည် ဆောင်းဦးရာသီတွင် စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိမည်ဟု ဆိုထားသည်။
iPad Pro2အတွက် M2022
M2 သည် Apple ၏ ပထမမျိုးဆက် ပရိုဆက်ဆာအသစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွမ်တမ်ခုန်ပျံကျော်လွှားမှု ဖြစ်လာမည်ဟု ယူဆရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် iPad Pro ဖြင့် M1 ကို စတင်ရောင်းချရန်အတွက် M2 ပရိုဆက်ဆာဗားရှင်းအသစ်ဖြင့် iMac Pro အသစ်ကို စတင်လိုက်ပါ (Dylandkt မှ ထောက်ပြထားသည့်အတိုင်း)၊ သိပ်သဘောမတွေ့ဘူး။ ထို့အပြင်၊ ဤ M2 သည် iMac Pro မှထုတ်လွှတ်နိုင်သော M1 အသစ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » ကောလာဟလများ » iMac Pro သည် CPU 1 ဖြင့် စတုတ္ထမြောက် ပရိုဆက်ဆာ M12 ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Logitech သည် POP Keys၊ POP Mouse နှင့် Logitech Desk Mat တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
iPhone မှ Wi-Fi မျှဝေနည်း